#QAAMONNI MAQAA SHANEE JEDHU KANAAN HIRRIBA DHABAN KUNNEEN SHAN MARAACHUFI SHAN MARAATANII TURANII?– Faajjii Dhugaasaa, Yuunibarsiitii Haroomayaa irraa! – Beekan Guluma Erena
#QAAMONNI MAQAA SHANEE JEDHU KANAAN HIRRIBA DHABAN KUNNEEN SHAN MARAACHUFI SHAN MARAATANII TURANII?– Faajjii Dhugaasaa, Yuunibarsiitii Haroomayaa irraa!	Beekan Erena
Politics Category June 6, 2016June 6, 2016OROMO
263SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
#QAAMONNI MAQAA SHANEE JEDHU KANAAN HIRRIBA DHABAN KUNNEEN SHAN MARAACHUFI SHAN MARAATANII TURANII?
Faajjii Dhugaasaa, Yuunibarsiitii Haroomayaa irraa!
Ni callisna yoo jedhan, akka itti callisantu nama dhiba, ni dubbanna yoo jedhani nama itiin dubbatantu dhiba. Kaan dhibaahet nama dhibaasisa, kaanimmoo dhibee taheet nama dhiba, kaanimmoo dhiibbaa taheet nama dhiiba,duuba akkuma nama dhibeetti dhabumuurra, akkuma dhiibbamanitti dhiibbamuurras, waa jechuun gaaridha. ”Callisanii buqqee tahuu mannaa, dubbatanii bubbee tahuu wayya.” jedhan. Dubbee karaa marsaareetii fi miidiyaa hawaasummaa kana irraan tooraa adda addaatiin gadhiifaman keessaa, wanti tokko takkaahuu na aarsa takkaahuu naaf galuus dida. deebi’een immoon maalif jedhee waan xiinxaluu yaala. #SHANEENMAALI? Ani shanee akki itti beeku Oromiyaatti akka biraatti, qilleensa inteerneetii oromiyaatiin alarraa as gara keenyatti faca’ummoo hiikaa biraatiin maqaa takkaahuu okokkobeessanii takkaahu immoo doloolloo keessatti darbatanii maqaa kana ittiin caaqu warra caaqaa, biyya gadhiisee, biyya alaattis caaqaa jiraatu. Jechi Shanee jedhu, jechoota afaan Oromoo keessatti jechoota duroo fi hooda,safuu fi safaffee qabuu dha. Namumti fedhe ,yeroo barbaade ittiin taphatuu miti. Shanee, shanan, shanacha fi kanneen kanaan hidhata qaban hedduu lafa kaahuu dandeenya. Shaneen safuu eegaa, shaneen safaffee eegaa, shaneen hooda qaba, dhugaarraa hin maqu, dhugaattis maqoo hin qabatu, dhugaarraa hin jallatu, karaa malee, hin bahu, bakka hin hunda hin dhaqu, waan hundas hin dubbatu, waan hundas hin nyaatu, karaa hundarra hin deemu, nama hundaattis hin dubbatu,Shaneen, araaraa, shaneen gadaa dha, shaneen tumaa dha, shaneen , tika, shaneen shanacha, heera qaba, seera qaba, abbaa qaba, haalas qaba. Shaneen, hamaarraa seesa, dhugaarraa hin seesu, araaratu shanachaani, lafa Oromoo fi qubannaasaatu shanee dha, horiisaatu shanee dha, Gadaatu miseensa shan qaba, Odaa seeratu shanee dha, ulfootu shaneen bahee ,shaneen gala, Birmadootu shaneen gaafatamee, shaneen argatama, mana Oromoo shaneen hordamee ijaarrama, kutaa shan qaba jechaa dha. Shaneen waallee cufa keessatti safuu fi hooda jabaatu kennamaaf. Shaneen, afaan isaa damma, hin hadhaahu, hin ajaawu, hin jibbamu, ni jaalatama, ni mi’aawa, waan dhugaan oolanii galaniif, waan dhugaan jiraataniif. Duuba shaneen sirnoota Oromoon gaggeefatu keessatti taatee taasifamuuf dabaalu malee, sirnaa miti, yookin jaarmiyaa miti. Shaneen waan Gadaan ergee fi qaalluun jajae raawwatu dhugaa fi heera gadaa tiksanii malee, aangoo addaa hin qaban. Araarsa deemanii heeraan shanacha taahanii shanachaan ddhugaa dubbatanii dhugaan wal jaalachiisu malee waan biraa hin godhan. Gumaa muruun heera gadaati, isaan tana bakkaan gahan malee isaan Gumaa miti…. waan hedduu tarrisuu dandeenya. Shaneen, akka laalcha Oromootti dhalli namaa kuniyyuu, nama shanii jedha, kuni Warra lamaan namaa irraa le’ee addunyaa kana guutee dha jechuu dha. Haya, ku haqa Oromooti yoo tahe, duuba dhaabni shanee jedhamu eessaa bahee,jenneet wal iyyaafachuu eegalleree. Dhihoo kana maqaa gurbaa saree maraattee , kan erga ajaawee nuti Qeerroon gannee waggaa shan tahe, kan jala deemtota isaa qofa irratti aangoo guddaa qabuu fi hattuu salaattuu jennee nuti qaata darbanne, kan maqaan isaa #GIRMAAXURUNAA,Kan nuti dur mooraa keessatti ittiin beeknummoo #BOMBAAHORROO” waliin wal qabsiisanii dhaaba #Shanee jedhuu hojjata,shaneetu Qeerroo gurgure, shaneetu oromoo fixaa jira, shaneetu oromoo diigaa jira, shaneetu gabrummaa Oromoo dheeressaa jiraa fi waan akka akkaa dubbisaan ture. Simagan jedheetuman waanin dubbise jaallan mooraa keessatti sochiirraa waliin jirruu fi karaa addaa addaatin wal qunnamnu hedduu dhaan abboo ”isin dhaaba Shanee jedhamu beektuu?,Sila dhaabne akkanaa yoomirraa dhaabbate hoo?” jedheen iyyaafannaa eegale. Haa galatooman dhaloonni keenya irra Caalaan isaanii Shanee akkuma ani beekutti beekurraa kan hafe, shanee dhaaba siyaasaa taatee Oromoo miitu akka hin beenne naaf himan. Duubaa Oromoon Diyaasporaa tuni dhaabuma akka Lukkuun cuucii falafalaa bultu,falafalaa bulu moo, rakkoo Oromoo hiikuf badii irriiba dhabuu? jennees wal gaafanne… Booddee jaalli keenya nubiraa fagoo jiru tokko, bishaan warra diyaaporaa kana dhuguu hin ooluutii, abboo shaneen Maali? jennaan, ”DHAABA OROMOO KEESSAA” tokko jedhe. Yoom dhaabbate jennaan, ”.. yoomessasaallee hin beeku garuu ala kanatti warri Shanee jedhaman, ABO- J/ Daawud Ibsaatiin durfamtu tahuu hin ooltu.” Gaaffin biraayyuu sammuutti naaf heddate ergasiimmoo. Hayyee abboo sila ABO’n biraas jiramoo? jedhee gaafannaan,” abboo maali atimmoo Poolisii gaafa waliin turree gaaffin nu cinqee nu qoratu san natti taateem. maal abbee ala kana hunduu dhaabuma mitii, lakkoofsayyuu qabaa, ABO– abaluun durfamtuu fi ABO’ maal taatee, ABO- akkasii jedhamanii kan waammaan hedduu dha jaaloo. Gaaffii guddina keessan dhaabbileen maqaa hedduu qaban, kan garuu maqaa saanii hunda keessa qubeen ”O” hin dhabamne dhuuga jiraachuun bar. Hayyee yaa warra” beekaan sagalatamii sagalii, kan sagaltamii sagalanuu jaamaa, kana sagaalillee waluu hin aragine….’aah! Edaa numa wayyaahii boo! waliin jenne mooraa fi doormii jiraannutti dachaanee. Dhaloonni qubee dhaabni maqaa Oromootiin beeku,dhalli Oromoo Oromiyaa jiru sadi qofa. Kunis:
1) ABO- Sammuu keenya qaree nu guddise, kanOromummaa nutti uwwise, nurraa fagaatus kan qorqalbiin keenya walfaana isa faana dhama’u, kan yaaddoonsaa immoo eelaa nutti tahe, 2). KFO- Kan ilmaan Oromoo hunduu tarii karaa isaanitiin immoo kaayyoon ABO’n qabatee waggoota 40′ caalaa kumaatamni itti wareegamaa jiru kana dhugoomsa laataa? jennee keessumaa tibba filannoo hunduu jala yaanee, waliin hadhaa fi mi’aawaa waliin dhamdhamnu. kanimmoo wareegama qaqqaaliis kaffalaa jiruu fi 3). OPDO. dhibee guddaa saba keenyaa taatee, diinaaf ajajamuun kan Oromoo fixaa fi ficcisiisaa jirtu kana qofa beekna. ABO eenyuu dhaan ,eenyuu dhaan maaliyyoo taatee san irraa quba hin qabnu nuti. Ammaa duuba dhihoo immoo karaa OMN tiin dhaabbileen Oromoo shan wal tahan yeroo jedhan deebineet gaaffiin sammuu keessatti nu dhufe, dhaaba lama malee sadi maqaa ABO himatan. KWO fi ADO qofatu maqaa biraatin as bahan, Isaanuma kanaayyuu edaa nuti ABO keenya jechaa turre malee dhaabbilee biraa yoom seene? Ammoo waanuma cufaafuu tokko tahuu isaanii gaafa dhageenyu, mobile hunda keenyaa erga ”Baga gammaddan!” Jettuutiin, message’n nu guutee kallattii adda addaa irraa. Warri garuu fuula interneetaa kana irratti #shanee#shanee Jechuun mataa nama dhukkubsan, kaneen hirribas dhabanii namas hirriba dhoowwan kunneen shan maraatanii turanimoo shan maraachuf taahuu laata? Akka nuti Dhaloonni qubee amannutti, Rakkoon Oromoo baayyina fi xiqqeenya dhaabbilee Oromoo miti, gaaffin Oromoo dhaaba kudhanii fi shaniin kan hiikkatu utuu hin taane, dhugaa fi quuqqaa dhugaa saba kanaaf jedhanii qabsaahuu qofaan hiikkata.#NOMORE #SHANEE, #NOMORE #ABO#NOMORE #KFO,NOMORE #KWO,NO MORE #ODF,NOMORE #IBSO, WE NEED THE UNITED OROMO FORCE! Yoo dhuguma dhaabbileen Oromoodhaa abjuu Oromoo abjootaa jiraatan, rakkoon ilaalchas tahee rakkoon siyaasaa tasumayyuu garagar isaan hin dhilu yoo ergama diinaatiin kan deeman tahe malee. Human tokkoon waan tokko irratti walii galuu ni dandahu. Kunis rakkoo fardii, gabrummaa hamtuu sabni keenya jalatti akka ilmaan yyuuyyee mataan itti guddatee, qaroon imlmaan isaa badaa fi dhuma jiran kaan jalaa baasuf tiyoorii fi filoosofii warra dhidhimaa 10 gaggaragalchuun furmaataa utuu hin taanee, dabeessummaafi doofummaa dha. ” mee dura kurupheen foon haa taatu” diina duuguuggaa sanyii nurratti labsee olaantummaa, waraanaa, olaantummaa diinagadee fi waan cufaa mijeeffatee umriisaa dheereffachuuf jiru kana tokkummaan walii galaatii saba keenyaf humna tahaa! fakkeessuuf utuun taanee, akaa safuu Oromootti garaadhaan waliin hojjadhaa! Yookan garuu ofirratti hojjachaa jiraachuu keessan beekaa! Gaafa Oromoon mirga dhabe, gonfate, gaafa Oromoon biyyasaa deeffate, gaafa Oromoon mataa olqabate, sabaan gahaa yaada garagaraa qabdaniin as bahaa! kanati sibaasaa, kana siif wayyya, kanatu egeree keetif nagaa waaraa fidaa jedhaatii lallabadhaa. Halaala teessanii wal qoccolaa diina nurra hin tursiissinaa. Dallaa xixiqqoo ollaa mitii, dhiigni keessanillee hin seenne keessatti of uggurtanii saba keenya gidiraa itti hin guddisinaa! SABNI GABROOME, NI INJIFATA, KAN GABROOMSES, NI BURKUTAA’A. DHUGAAN NI MOOTI, OROMOON DHUGAA QABAA, DHUGAAN ISA WALIIN DHAABBATA! Ani xummureera.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa263SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← YE ITOOPHIYAA TAARIK KENIGISTE SAABAA ISKE ADUWAADIL-Irratti Ibsa Mike Gellal’n kenname.
GADDAAN GEGGEESSINE-#‎Dr‬.Daniel_Gizaachootiif yaadannoo naaf haa taatu!-SABBOONTUU LAMMII’TIIN →